» निधारको चाउरीपनाले प्राणघातक रोगको संकेत दिन्छ !
निधारको चाउरीपनाले प्राणघातक रोगको संकेत दिन्छ !
८ चैत्र २०७६, शनिबार २२:०४
निधारको चाउरीपनाले संधै बढ्दो उमेरको मात्र संकेत दिदैँन । यसले कहिलेकाँही शरीर भित्रको प्रतिकूल अवस्थाको पनि संकेत दिन्छ । एक शोधमा निधारमा चाउरीपना औसतभन्दा धेरै बढ्नु र एथेरोसिलेरिोसिस नामक हृदय रोगको आपसी सम्बन्ध हुजे देखाएको छ । यस किसिमको बिमारीमा धमनीहरु कडा बन्छन् जसकारण ह्दयघातको खतरा हुन्छ ।
फ्रान्सको सेन्टर हस्पिटलायर यूनिभर्सिटी डी टाउलाउसका प्राध्यापकले चाउरी जति बढ्छ त्यति नै ह्दयरोगले आक्रमण गर्ने खतरा बढ्ने बताएका छन् । चाउरीपनालाई ह्दय रोगको खतरा पहिचान गर्नका निम्ति ब्लड प्रेशर वा अन्य तरिकाभन्दा राम्रो साधन त मानिदैँन तर यसले खतराको घण्टीको रुपमा भने काम गर्न सक्छ ।
कोलेजन प्रोटिन र अक्सिडेटिभ स्ट्रेस, चाउरी बढाउन र एथेरोसिलेरोसिस दुवैका लागि जिम्मेवार छन् । यसैबीच वैज्ञानिकहरुले यी दुई चाउरी र एथेरोसिलेरोसिसको एकअर्कामाथिको प्रभावबारे पहिलो पटक जाँच गर्‍याे । ३२ सय वयस्कहरु माथिको जाँच पछि वैज्ञानिकले चाउरी बढ्नाले ह्दय राेगको कारण ज्यान जाने खतरा दश गुणा बढ्ने पाए ।एजेन्सी